Vaovao - CSPower HTL nohavaozina ny batterie gel solid-state cycle lalina - ataovy azo antoka kokoa ny bateria ary hanana fiainana lava kokoa!
CSPower Battery HTL solid-state High Temperature Deep Cycle gel batterie tatitra fanatsarana ny teknolojia
1. Super avo sy ambany hafanana fanoherana
1.1 Ny fampiasana alloys manokana mahatohitra harafesina super (firaka firaka: firaka kalsioma aluminium vifotsy), manokana grid rafitra (ny savaivony ny fisandratana grid, ny vifotsy afa-po ny manandratra grid), tena manatsara ny mari-pana ny tontolo iainana.Ny fanoherana ny harafesina amin'ny takelaka.
1.2 Ny tahan'ny manokana amin'ny takelaka tsara sy ratsy ary electrolyte manokana (electrolyte rano deionized teknolojia avo lenta) dia afaka manatsara ny fivoaran'ny hydrogène overpotential ny bateria ary mampihena be ny fahaverezan'ny rano amin'ny tontolo iainana ambony.
1.3 Ny raikipohy mametaka firaka dia mampiasa fitaovana fanitarana mahatohitra hafanana, izay afaka manatanteraka tsara na dia amin'ny tontolo mafana aza.Amin'izay fotoana izay ihany koa, ny fahombiazan'ny batterie amin'ny hafanana ambany dia tsara, ary ny bateria dia mbola afaka miasa ara-dalàna na dia ao anatin'ny -40 ° C aza.
1.4 Ny akorandriaka batterie dia vita amin'ny fitaovana ABS mahatohitra ny mari-pana ambony, izay afaka misoroka tsara ny akoran'ny batterie amin'ny bulging na deformation amin'ny tontolo mafana.
1.5 Ny electrolyte dia vita amin'ny silica fumed nano-scale, miaraka amin'ny fahaiza-manaon'ny hafanana sy ny fahombiazan'ny hafanana tsara, izay afaka misoroka tsara ny trangan-javatra mandositra mafana izay mora mitranga amin'ny bateria mahazatra.Ao amin'ny tontolo iainana ambany hafanana, ny fahafahan'ny fivoahana dia azo ampitomboina amin'ny 40% na mihoatra.Mbola afaka miasa ara-dalàna izy io amin'ny tontolo manodidina ny 65 ℃.
1.6 Nano colloidal poti: Ny poti ny rafitra fanaparitahana amin'ny ankapobeny mangarahara colloidal poti eo anelanelan'ny 1 ka hatramin'ny 100 nanometers, noho izany dia miely patrana sy manana toetra tsara kokoa fidirana, mahatonga ny bateria mavitrika kokoa mandritra ny fiampangana sy ny famoahana.
Ny anjara asan'ny electrolytes nanocolloidal:
1.6.1 Ny colloidal electrolyte dia afaka mamorona mafy fiarovana sosona manodidina ny electrode lovia, miaro ny electrode takelaka amin'ny fahasimbana sy ny fahatapahan'ny noho ny hovitrovitra na fifandonana, hisorohana ny electrode takelaka tsy ho harafesina, ary koa mampihena ny electrode takelaka miondrika sy ny deformation rehefa ny bateria dia ampiasaina eo ambany enta-mavesatra.Ny fizaran-tany fohy eo amin'ny takelaka dia tsy hitarika amin'ny fihenan'ny fahafaha-manao, ary manana fiarovana ara-batana sy simika tsara, izay avo roa heny ny fiainan'ny bateria asidra firaka mahazatra.
1.6.2 Azo antoka ny fampiasana, mahasoa ny fiarovana ny tontolo iainana, ary an'ny tena famatsiana herinaratra maitso.Ny electrolyte amin'ny batterie gel dia mafy, misy rafitra voaisy tombo-kase, ary ny electrolyte gel dia tsy mitete mihitsy, ka tsy miova ny lanjan'ny ampahany tsirairay amin'ny bateria.Amin'ny fampiasana tsipika firaka kalsioma-firaka-fipoitra manokana, dia mahatohitra kokoa ny harafesina ary manana fanekena famandrihana tsara kokoa.Tsy misy electrolyte spillage, tsy misy singa manimba ny vatan'olombelona ao amin'ny dingan'ny famokarana, tsy misy poizina, tsy mandoto, manalavitra be dia be ny electrolyte spillage sy ny fidirana mandritra ny fampiasana ny nentim-paharazana lead-asidra bateria.Kely ny onjan'ny mitsingevana, miteraka hafanana kely kokoa ny bateria, ary tsy misy stratification asidra ny electrolyte.
1.6.3 Fampisehoana tsingerin'ny fivoahana lalina tsara.Rehefa mivoaka lalina ny bateria ary avy eo dia fenoina ara-potoana, dia azo averina 100% ny fahafaha-manao, izay afaka mahafeno ny filan'ny matetika sy ny fivoahana lalina, noho izany dia midadasika kokoa noho ny an'ny bateria asidra firaka.
1.6.4 Ny famotsorana tena dia kely, tsara ny fampisehoana lalina, ny fahaiza-manaiky ny famandrihana dia matanjaka, ny fahasamihafana ambony sy ambany dia kely, ary lehibe ny fahafahan'ny herinaratra.Nisy fanatsarana lehibe natao tamin'ny fahaiza-manomboka ny mari-pana ambany, ny fahafaha-mitahiry ny fiampangana, ny fahaiza-mihazona electrolyte, ny faharetan'ny tsingerina, ny fanoherana ny vibration ary ny fanoherana ny fiovan'ny mari-pana.
1.6.5 Mampifanaraka amin'ny tontolo isan-karazany (temperature).Azo ampiasaina amin'ny mari-pana isan-karazany -40 ℃-65 ℃, indrindra fa ny mari-pana ambany dia tsara, mety ho an'ny faritra avaratr'i alpine.Manana fampisehoana seismika tsara izy io ary azo ampiasaina amin'ny tontolo masiaka isan-karazany.Tsy voafetran'ny habaka ary azo apetraka amin'ny lafiny rehetra rehefa mampiasa azy.
2. Tena lava kokoa ny fiainana
2.1 Ny rafitra tokana tsy manam-paharoa, firaka manokana mahatohitra ny harafesina ary ny raikipohy ara-materialy tsy manam-paharoa dia manatsara ny tahan'ny fampiasana ny fitaovana mavitrika, ary ny fahaiza-manaon'ny bateria aorian'ny fivoahana lalina dia tena tsara, na dia apetraka amin'ny zero volts aza, dia afaka sitrana ara-dalàna, ka ny bateria manana tsingerin'ny tsara mateza, ampy fahaiza-manao sy ny fiainana lava.
2.2 Ny akora madio rehetra dia ampiasaina, ary kely ny electrode self-discharge bateria.
2.3 Ny colloidal electrolyte amin'ny ambany hakitroky dia ampiasaina, ary manokana electrolyte additives manampy, izay mety hampihena ny harafesiny ny electrolyte ny electrode lovia, mampihena ny fisehoan'ny electro-hydraulic stratification, ary manatsara ny fiampangana fanekena sy ny overdischarge fampisehoana ny bateria. .Noho izany dia manatsara be ny fiainan'ny bateria.
2.4 Ny rafitra radial manokana dia raisina, ary ny hatevin'ny takelaka 0.2mm dia mitombo mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanitarana ny fiainan'ny bateria.Ny bateria dia afaka mahatsapa ny fiarovana ny bateria mandritra ny fivoahana, ka manakana ny batterie tsy ho tafahoatra.
2.5 Ny fitaovana mavitrika amin'ny takelaka electrode dia vovoka firaka indrindra.Amin'ity fanavaozana ny teknolojia ity, ny raikipohy farany amin'ny fitaovana mavitrika dia ampiana amin'ny takelaka electrode, izay mahatonga ny fiampangana sy ny famoahana haingana kokoa ary tsy misy fiantraikany amin'ny androm-piainany.
2.6 Mampiasà teknolojia fivoriam-pivoriana mahery vaika mba hiantohana tsara kokoa ny fiarovana ny bateria.4BS lead paste teknolojia, fiainana tsingerin'ny bateria lava.
2.7 Ny rehetra dia mampiasa ny teknolojia fananganana aorian'ny fanangonana ny bateria, izay mampihena ny mety hisian'ny fandotoana faharoa amin'ny takelaka ary manatsara ny tsy fitoviana amin'ny bateria.Mandritra izany fotoana izany, ny tahan'ny fampiasana ny takelaka electrode averina indray dia mihatsara.(tsy voatery ampiana)
2.8 Mampiasa entona re-simika synthesis teknolojia, ny bateria dia tena avo famehezana fanehoan-kevitra fahombiazana, tsy misy asidra zavona rotsak'orana, fiarovana, fiarovana ny tontolo iainana, ary tsy misy loto.
2.9 Ny teknolojia famehezana azo itokisana sy ny valva fiarovana avo lenta dia ampiasaina mba hahazoana antoka fa ny bateria dia manana famehezana azo antoka sy azo antoka.
CSPower HTL bateria gel cycle lalina amin'ny hafanana miaraka amin'ny teknolojia vaovao (fitaovana bebe kokoa ao anatiny) nefa tsy mitombo ny vidiny, ataovy azo antoka kokoa ny bateria ary hanana fiainana lava kokoa!
#Batterie solaire avo lenta # bateria gel cycle lalina #batterie gel solid-sate #batterie ela velona #battera teknolojia vaovao
teo aloha: Fampandrenesana fialantsasatry ny asa CSPower 2022
Manaraka: Lahatsary iray mampiseho anao ny fomba fametahana batterie - Batterie CSPower
Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Batterie 12v 7ah azo averina Batterie tsy misy fikojakojana Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie cellule solaire Battery Ups ho an'ny solosaina